Barnaamijka Qado | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka waxay kaqeyb qaataan Barnaamijka Qado ee Dugsiyada Qaranka (NSLP). Cunnooyinka ayaa loo qorsheeyey iyadoo loo eegayo shuruudaha NSLP, iyada oo cunno kasta oo ka kooban hal illaa laba wiqiyadood oo hilib ah ama hilib beddel ah, ugu yaraan hal qaadasho oo miro ah, khudrad, hadhuudh ama rooti iyo siddeed wiqiyadood oo caano ah. Qadaduhu waa inay la kulmaan saddex-meelood meel ka mid ah kalooriyeyaasha iyo gunnooyinka lagu taliyo maalin kasta (RDA) ee nafaqooyinka muhiimka ah (borotiinka, birta, kaalshiyamka, Faytamiin A, Faytamiin C) oo ku saleysan da'da / fasalka kooxda. Bixinta cabirradu waa kuwa lagu taliyay Tilmaamaha Cunnada ee USDA. Tirada adeegyadu waa ku habboon tahay inay ka caawiso ardayda inay baraan sida adeeggu u ekaan karo. Xulashada waxyaabaha la soo bandhigo ayaa la siiyaa heer kasta si ay isugu dayaan inay la kulmaan cunnada ay doorbidayaan ardayda.
Bixi iyo u adeeg
Qawaaniinta federaalka ee "Offer vs. Serve" ayaa u baahan in ardayda la siiyo (halkii loo adeegi lahaa) dhammaan shanta cunno ee ka kooban cuntada qadada oo buuxda. Ardaydu waxay dooran karaan saddex, afar ama shan shey oo raashin ah iyagoo ku saleynaya dookhooda iyadoo mid ka mid ah walxahaas ay yihiin adeeg buuxa oo miro ama khudrad ah. Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay wada qaataan dhammaan waxyaabaha cuntada la bixiyo maxaa yeelay waxay siisaa cunno isku dheellitiran oo ah qiimaha ugu fiican.
Natiijooyinka cilmi baarista ee hadda waxay xoojineysaa muhiimadda miraha iyo khudradda ee cuntada. Waxaan sii wadeynaa inaan ku siino noocyo kala duwan oo miro iyo khudrad ah, baararka saladhka iyo xulashooyinka kale ee qadada. Sannadkan, waxaan sii wadi doonnaa inaan ka iibsanno miraha iyo khudradda Bergin Fruit iyo Nut Company oo aan kaqeyb qaadano Barnaamijka Soosaarka Fresh ee Waaxda Difaaca . Barnaamijkan dowladdu wuxuu gacan ka geysanayaa kharashaadka isdaba-marinta sidaa darteed waxaan ku siin karnaa xulashoo miro iyo khudrad badan Ardayda aan dooran khudradda ama khudradda waa inay bixiyaan kharashka cunnada aan federaalku maalgelin.
Barnaamijkeena qadada ee iskuulka waxaa looga baahan yahay inuu bixiyo caano oo ka mid ah qaybaha qadada. Xulashada dufanka ama 1% caano ayaa la bixiyaa. Qadada laga keenay guriga ama iibsashada à la carte, qiimaha kartoonka caanuhu waa 50 senti.
Caano laga dhuuqayo laaktooska ayaa la siin doonaa ardayda iyada oo aan laga qaadi doonin lacag dheeraad ah marka ay waalidka ama masuulka ka codsadaan qoraal. Fadlan ku dar magaca, fasalka iyo dugsiga ilmaha. Codsiyada waalidka ama ilaaliyaha waxaa loo gudbin karaa Jane Bender oo laga helo jane.bender@minnetonkaschools.org .
Lacag qadada aan dib loo celin karin
Cunto fudud oo fudud oo ku jirta Buug-yaraha Dugsiyada
Wada-hawlgalayaasha Qado Dugsiga:
Bergin Fruit iyo Nut Company
Ururka Caanaha Midwest
Focus Focus School - Iskuxirka PDF